Medallia: Natsiridza iyo B2B Kasitoma Chiitiko | Martech Zone
Medallia: Natsiridza iyo B2B Kasitoma Chiitiko
Chitatu, November 13, 2013 Chitatu, November 13, 2013 Douglas Karr
Kunzwisisa uye kuteedzera mhando yeako akazara mutengi ruzivo rwuri kuramba ruchiomera nekuti vatengi vako vanobata zvikamu zvakawanda zvakasiyana zvesangano rako. Nevashambadziri vachishandisa inotungamira-uye-yekutaurirana software, izvi zvakagadzirirwa ruzivo maturusi haangori anodhura uye haashande, asi anogona kuita kuti zvisave nyore kuti uve nemaonero akazara evatengi uye ruzivo rwavo nekambani yako.
Makambani ekushambadzira anogona kunyatso nzwisisa nyaya dzevatengi kana vachinge vaona maonero akabatana emhando dzese dzemhinduro, vachibatanidza kugutsikana kwese / Ukama ongororo yekuona nekugutsikana neimwe yeakakosha mapindiro emapoinzi ayo pamwe chete anoita ruzivo rwevatengi.
Medallia's nyowani B2B yekupa inogonesa izvi. Inokupa iwe zvinopfuura kungoona zvishoma mumaonero evatengi vako echiitiko. Iwe unowana mufananidzo wakazara, iwo maonero ese ezviitiko izvo zvese zvevatengi vako vane chekuita nazvo zvavari kupfuura. Kubatsira kwemaonero aya? Inotaridza mikana mikuru yekuvandudza iri muchinjika-dhipatimendi mune zvakasikwa, mikana yekuvandudza iyo, nepo iri pachena kune vatengi vako, inogona kutsvedza pakati pekupararira mukati mematanda emafemu eB2B.
Mhinduro kubva kuMedallia inounganidza mhinduro kubva kune wese mutengi yekubata webhusaiti, nzvimbo, rutsigiro, kutengesa kwakatwasuka, kunyangwe kudyidzana kwevamwe - wobva wanyoresa mhinduro idzodzo muchirongwa chakabatana chinopa kambani yako maonero anoenderana pamadhipatimendi. Izvo hazvingobvumire ako madhipatimendi kuti aone chikamu chebhizinesi ravanotarisira; inogonesa zvikwata zveakaundi yako kuti vanzwisise mhinduro padanho reakaundi uye zvinoita kuti vatungamiriri vako vanzwisise mufananidzo uzere wezviitiko zvevatengi vako.
Tags: b2b kasitoma njereb2b kugutsikana kwevatengimedallia
Playnomics: Nharembozha App Kuwana Kukosha Kufanozivisa (AVP)